ULFAA’UU/MUCAA GODHACHUU -Karooraafi Tarsiimoolee eeggannaa tokko tokko!! – Beekan Guluma Erena
ULFAA’UU/MUCAA GODHACHUU -Karooraafi Tarsiimoolee eeggannaa tokko tokko!!	Beekan Guluma Erena
HEALTH May 2, 2016May 2, 2016bEEKAN gULUMA
Namoonni baay’een haala jireenyaa mo’achuu dadhabuurraanis ta’ee karoora dhuunfaa qabaachuudhaan dhala godhachuurraa yeroo itti of qusatan nimul’ata. Keessumattuu dhaloonni amma jiru kun dafee dhala godhachuuratti sodaataadha. Dhugaan Oromoon qabu akkuma jirutti ta’ee ammo dawwaa faranjiin tolchitee namatti kennituun gubachuurraa mala uumamaatiin gargaaramuun fayyaafis ta’e karoora ofii faana waan mara walsmsiisuun daran barbaachisaadha.
Kanaafis abbaan manaafi haati warraa tokko tarsiimoolee armaan gadii kanatti gargaaramuun gaariidha.
Guyyaa marsaan laguu itti dhufe ( Guyyaa isa jalqabaarraa kaasee ) guyyoota 14 lakkoofna; guyyaan kun guyyaa itti hanqaaquun gadi dhiifamudha. Guyyaa kana fuuldura guyyaa sadiif, guyyaa kana booda guyyaa lamaaf walumaagalatti guyyaa shaniif ( 11-16 ) qunnamtii irraa of qusachuun barbaachisaadha! Haata’u malee, carraan baay’ee xiqqoo guyyootuma kanaa alas ulfa ta’uu ni jira ta’a. Kanaafuu guyyaa sana fuuldura guyyaa shan sana boodas guyyaa shan of qusachuun caalaatti fiixaan ba’umsa kenna.
Marsaan laguu gaafa Fulbaana 1 yoo dhufe, hamma ta’e of eeggachuudhaaf yoo ta’e fulbaana 11 -16; sirriitti of eeggachuudhaaf yoo ta’e fulbaana 9- 19 of quunnamtii saalaarraa of eeggachuu barbaachisa.
Fakkeenya 2: Pregnant Muslim woman with happy expression
Marsaan laguu gaafa Caamsaa 22 yoo dhufe, hamma ta’e of eeggachuudhaaf yoo ta’e Waxabajji 3- 8 sirriitti of eeggachuudhaaf yoo ta’e Waxabajji 1- 11 of qusachuu barbaachisa.
Malli ittisa dahumsaa kun walumaagalatti dandeettiin ittisuu isaa haga warra kanneenii ( qorichoota) hin gahuu dhiisuu malus mala utuu dawwaatiin of hinmiidhiin tooftaa uumamaatiin gargaaramanidha. Hubadhaa! Guyyaan laguu dhaabbataa ta’uuf dhiisuu shamarranii dhimma kanarratti murteessaadha!
Oromoon horuu qaba; baay’achuu qaba kan jedhutti amannammoo!!
← DHUKKUBBII DUGDAA-Tooftaalee akkamiitiin irraa fooyyofna? Kunooti dubbisaaa!!
KANAAREE GUDDISTI JABBII- walaloo bareedaa →